ထရေးဒင်း Manager ကို Pro ကို EA ၏ပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း - အကောင်းဆုံး Forex EA ရဲ့ | ကျွမ်းကျင်သူ Advisors အကြံပေးအဖွဲ့ | FX စက်ရုပ်
ပင်မစာမျက်နှာထရေးဒင်း Manager ကို Pro ကို EA ၏ထရေးဒင်း Manager ကို Pro ကို EA ၏ပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း
အကောင်းဆုံး Forex EA'S | ကျွမ်းကျင်သူအကြံပေး | FX စက်ရုပ် ထရေးဒင်း Manager ကို Pro ကို EA ၏ 2
စျေးနှုန်း: $ 599 (starter အထုပ် / 1 တိုက်ရိုက် & 1 DEMO ACCOUNT ကို, အခမဲ့ updates & အထောက်အပံ့စျေးလျှော့စျေး)
ငွေကြေးစွမ်း: EURAUD, EURJPY, EURUSD, GBPJPY, GBPUSD, USDCAD နှင့် USDJPY
မှတ်စု - တင်းကျပ်စွာကန့်သတ်ချက် - 50% OFF - 1,000 + ကုန်သွယ်ရေးမဟာဗျူဟာသို့ဝင်ရောက်ခွင့်
ရရှိနိုင်ထရေးဒင်း Manager ကို Pro ကို EA ၏၏4ကွဲပြားခြားနားသော packages များအခုအချိန်မှာရှိပါတယ်:
- စတား: 1 Live & 1 Demo Account - ပုံမှန်ချိန်ညှိချက်များ - ပုံမှန်စျေး - တစ်နှစ်လျှင် $ 1,199
- စံ: 1 Live & 1 Demo Account - ပုံမှန်ချိန်ညှိချက်များ - ပုံမှန်စျေး - $ 1,999 သက်တမ်း
- ပရော်ဖက်ရှင်နယ်:3Live & 1 Demo Accounts - ပုံမှန်ချိန်ညှိချက်များ - ပုံမှန်စျေး - $ 2,599 သက်တမ်း
- ပလက်တီနမ်:5Live &3သရုပ်ပြအကောင့်များ - ပုံမှန် & အပိုဆု SET-Files - ပုံမှန်စျေး - $ 3,199 သက်တမ်း
အဆိုပါပလက်တီနမ်အထုပ်ကိုသင်အောက်ပါ2အခမဲ့အပိုဆု sets မှ access ကိုပေးသည်:
- DeltonPRO EA - စွမ်းဆောင်ရည်ပြည့်ဝသူနှင့်အကောင်းဆုံး Forex ကျွမ်းကျင်သူအကြံပေး 2016 - ဆန်းစစ်ခြင်း
- Sniper Suite EA - Metatrader4ပလက်ဖောင်းအတွက်အမြတ်အစွန်းဆိုင်ရာ Forex ကျွမ်းကျင်သူအကြံပေး - ဆန်းစစ်ခြင်း
- Spartan Bolt EA - Professional Traders များအတွက်အပြည့်အဝအလိုအလျှောက် FX ကျွမ်းကျင်သူအကြံပေး
ထရေးဒင်း Manager ကို Pro ကို EA ၏ပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း - တစ်ခုတည်းသော Forex ကျွမ်းကျင်သူအကြံပေး၏အကောင်းဆုံး
ထရေးဒင်း Manager ကို Pro ကို EA ၏ တစ်ဦးအလွန်အမြတ်အစွန်းသည် FX ကျွမ်းကျင်သူအကြံပေး အဆိုပါ Metatrader4(MT4) ပလက်ဖောင်းနှင့်ယုံကြည်စိတ်ချရသော Forex Trading ၏စက်ရုပ် မှဖန်တီးသည် Alden Matteo နှင့်ကမ္ဘာ့အဆင့်မီပရော်ဖက်ရှင်နယ်ကုန်သည်များသူ့အဖွဲ့။
ဤသည်၏အသစ်တစ်ခုကိုမျိုး Forex EA ၏ သငျသညျပိုကောင်းသင့်ကုန်သွယ်စတိုင်ကိုက်ညီနှင့်သင်ချင်သောအမြတ်အစွန်းရည်မှန်းချက်များအောင်မြင်ရန်သင့်ကိုယ်ပိုင်မဟာဗျူဟာကိုရွေးချယ်နိုင်သောနေရာ။ ထိုသို့သက်သေပြလျက်ရှိသည် ထရေးဒင်း Manager ကို Pro ကို EA ၏ တိုင်းကုန်သည်များလိုအပ်ချက်များကိုတွေ့ဆုံခဲ့သည်။
အဆိုပါအလိုအလျောက်ပရိုဂရမ်ပုံမှန်အားဖြင့် FX ကုန်သည်များထိုကဲ့သို့သောနည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်အခြေခံခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာသည်အတိုင်းပြုပါသမျှသောကုန်သွယ်လှုပ်ရှားမှုများလုပ်ပေးစျေးကွက်ကြိုတင်ခန့်မှန်း, ငွေစီမံခန့်ခွဲမှု, ဝယ်ယူရောင်းချအမိန့်မဖွင့်, အမိန့်ပိတ်နဲ့တခြားပရော်ဖက်ရှင်နယ် features တွေပါလိမ့်မယ်။
tmp EA ၏အဆိုပါ Metatrader4(MT4) ပလက်ဖောင်းများအတွက်သက်ဆိုင်သည်။ ဤသည် Forex ကျွမ်းကျင်သူအကြံပေးနှင့်အတူအလုပ်လုပ်နိုင် EURAUD, EURJPY, EURUSD, GBPJPY, GBPUSD, USDCAD နှင့် USDJPY အဆိုပါ 1 နာရီအချိန်ဘောင်ကို အသုံးပြု. ငွေကြေးအားလုံး။
အဆိုပါ Forex စက်ရုပ် ဿုံစမ်းသပ်ပြီးနှင့် 100% တည်ငြိမ်အမြတ်အစွန်း (ချောမွေ့ဖြောင့်ဂရပ်) ဖြစ်သက်သေပြလျက်ရှိသည်။ သင်တစ်ဦးကိုမျှော်လင့်ခြင်းငှါ default settings ကိုနဲ့အတူ 10-25% ၏လစဉ်ပိုက်ကွန်ကိုတည်ငြိမ်အမြတ် နှင့် advanced settings တွေနဲ့ 100-500% တည်ငြိမ်အမြတ်။ အများဆုံးမဲနှိုက်-Down သာ 10% ဖြစ်ပါတယ်။
ထရေးဒင်း Manager ကို Pro ကို EA ၏ EA ၏မဟာဗျူဟာနှင့်ပြင်ဆင်မှုအားလုံးနီးပါးကိုတုပနိုင်စွမ်းရှိသည်။ ဤရွေ့ကားပါဝင်သည် DeltonPRO EA ၏, Sniper Suite ကို EA ပင် Spartan Bolt က EA ၏ အဆိုပါဝယ်ယူမှတဆင့်ရရှိနိုင်သောအပြင်အဆင်များ ပလက်တီနမ်ပက်ကေ့.
ဤ FX စက်ရုပ် နေသမျှကာလပတ်လုံးပွဲစားကို EA ကုန်သွယ်ခွင့်ပြုထားအဖြစ်ပွဲစားနှင့်အကောင့်မဆိုအမျိုးအစားနှင့်သဟဇာတဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ဟာအများအားဖြင့်အသုံးပြုတချို့ကပွဲစားများမှာ Pepperstone, RoboForex, Octafx, Exness သို့မဟုတ် Forex.com.
ထရေးဒင်း Manager ကို Pro ကို EA ၏ သင်အောင်မြင်မြင်ချင်သူကိုကုန်သည်တွေအနေနဲ့ကျွမ်းကျင်သူအဖွဲ့ကတီထွင်ခဲ့သည်!
၏အသုံးပြုမှုကို Make ထရေးဒင်း Manager ကို Pro ကို EA ၏ နှင့်ရွှေသို့သင်တို့၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကိုဖွင့်!
အကြောင်းမကြားဘူး FX ထရေးဒင်း ခင်မှာစက်ရုပ်?
မည်သည့်ကြိုးစားအားထုတ်မှုမပါဘဲလွယ်ကူသောပိုက်ဆံဘာသည် ထရေးဒင်း Manager ကို Pro ကို EA ၏ အားလုံးအကြောင်းပါ။ ဘောင်, အကြေးခွံနှင့်သင့်ငွေကြေးလွှဲပြောင်းမှုမှာကန့်သတ်သငျသညျပေးခဲ့ကြပြီးနောက်, စက်ရုပ်ကျော်ကြာနှင့်သင်တို့အဘို့အရောင်းအပေါငျးတို့သကိုင်တွယ်။ ဤသည်အဖြစ်ကောင်းစွာအခြားအရေးကြီးကိစ္စရပ်များပေါ်တွင်သင်၏စွမ်းအင်အာရုံစိုက်နေချိန်တွင်ထိန်းချုပ်မှုယူရန်သင့်အားခွင့်ပြုထားသည်။
အဆိုပါ FX ကျွမ်းကျင်သူအကြံပေးအပေါ်အဲ့ဒီအချိန်မှာနှင့်အမြတ်မျှော်လင့်ထားနိုင်ပါတယ်သည့်အခါလုပ်ငန်းလည်ပတ် 24 /5အမြတ်အစွန်းလဲလှယ်ခွင့်အလမ်းများနှင့်သပိတ်ရှာဖွေနေ။ သင်ကကို turn off မဟုတ်လျှင်ဒီတော့သင်ကတစ်ခုတည်းအကျိုးအမြတ်ကုန်သွယ်မှု option ကိုလက်လွတ်မည်မဟုတ်။
ကျွန်တော်တို့ကိုလူသားမြားသမတူဘဲ, အ FX စက်ရုပ်စိတ်ခံစားမှုမတည်ငြိမ်မှုများကငျးမဲ့သည်နှင့်သာလုံးဝ Calculator ပတ်ဝန်းကျင်တွင်အလုပ်လုပ်ပါလိမ့်မယ်။
Trading Manager Pro EA - ကုန်သွယ်ရေးယုတ္တိဗေဒ၊ တည်ဆောက်ပုံနှင့်အခြားလိုအပ်ချက်များအကြောင်း
ထရေးဒင်း Manager ကို Pro ကို EA ၏ အချို့သောနာရီအတွင်းအရောင်းအ, လာမယ့်စုံတွဲနာရီသို့မဟုတ်နေ့ရက်ကာလအဘို့စျေးနှုန်းညှနျကွားခပိုင်းခြားသုံးသပ်ပြီးဆုံးဖြတ်သည်။ ဒါ့အပြင်ဒီကျွမ်းကျင်သူအကြံပေးသင်သတ်မှတ်ထားတဲ့အန္တရာယ်များနှင့်နှစ်လိုဖွယ်အမြတ်အစွန်းနှင့်အတူကုန်သွယ်ခွင့်ပြုသည်။ အဆိုပါကုန်သွယ်မှုစနစ်ကြီးမြတ်အမြတ်အစွန်းရရှိမညျနှင့်နေ့တိုင်းအရောင်းအဖွင့်လှစ်။
ဤ Forex စက်ရုပ် အပေါ်အရောင်းအ EURUSD, GBPUSD, GBPJPY, USDJPY, AUDUSD နှင့် EURJPY ငွေကြေးအားလုံး။ ကျနော်တို့ $ 10,000 / 0.01 တွေအများကြီးတစ်နိမ့်ဆုံးသိုက်အကြံပြုအပ်ပါသည်။
ဒီ Forex EA ၏၏ installation ရိုးရှင်းတဲ့ဖြစ်ပါသည်: ကူးယူနှင့်သင့် MT4 ကျွမ်းကျင်သူများကဖိုင်တွဲသို့ဖိုင်ကို paste, ကသာ ONE ဖိုင်ထားရှိရေး။ သင်တို့သည်နောက်အတွေ့အကြုံရှိသည်နှင့်သင့်တပ်ဆင်မှုအတွက်ထောက်ခံမှုလိုအပ်ခဲ့လျှင်, ငါတို့သည်သင်တို့အထောက်အကူပြုဖို့ပျော်ရွှင်ဖြစ်လိမ့်မည်!
ထရေးဒင်း Manager ကို Pro ကို EA ၏ Update ကို V1.10 (မေ 16, 2017)
အဆိုပါဇယားအပေါ်တိုက်ရိုက် Spread သတင်းအချက်အလက်
MACD Indicator သည်ရာထူးအမည်
ဇယားအပေါ်အသံနဲ့အိုင်ကွန်နှင့်အတူ signal သတိပေးချက်
ပိုက်ဆံစီမံခန့်ခွဲမှု function ကိုများနှင့်နည်းဗျူဟာ
ထရေးဒင်း Manager ကို Pro ကို EA ၏ Update ကို V2.0 (ဇူလိုင်လ 25, 2017)
ပွင့်လင်းအမိန့်ကန့်သတ် / နေ့နှင့်အတူနယူး setting ကို
တစ်ခုချင်းစီကို Indicator နှင့်စျေးနှုန်းအရေးယူ signal ကိုကုန်သည်ရဲ့လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်အဖြစ်အမျိုးမျိုးသောအဖြစ်မျိုးစုံအချိန်ဘောင်ကနေ filtered ဖတ်နိုင်ပါသည်။
/ ချွတ်ရွေးချယ်မှုအပေါ်အကြောင်းကြားစာတက် Pop
ထရေးဒင်း Manager ကို Pro ကို EA ၏ Update ကို V2.10 (ဖေဖော်ဝါရီလ 13, 2018)
EA ၏အတိုဆုံးအချိန်ကာလအတွင်းအကျိုးမပေးနိုင်တိုးပွားလာသောလူအပေါင်းတို့အရောင်းပိတ်လိုက်နိုင်ပါလိမ့်မည် mode ကိုပျမ်းမျှပြန်ဖွင့်စဉ်ကပထမဦးဆုံးယူအမြတ်အစွန်းများအကြားခွဲခြားခြင်းနှင့်အလားအလာဆုရရှိသူရိတ် pips အဖြစ်ကို run ပါစေရန်ယူအမြတ်ပျမ်းမျှ A မြင့်ဆုံးလိမ့်မည်။
ထရေးဒင်း Manager ကို Pro ကို EA ၏ Update ကို V2.20 (မေ 1, 2018)
ထရေးဒင်း Manager ကို Pro ကို EA ၏ Update ကို V2.3 (အောက်တိုဘာလ 12, 2018 ကနေနောက်ဆုံးပေါ် UPDATE)
ယ်ယူရန် Stop, ဝယ်ကန့်သတ်ထည့်သွင်းခြင်း, Stop ရောင်း, ဇယားအပေါ်ကန့်သတ် function ကိုနှင့် button ကိုရောင်း။ အမြတ်အစွန်းရပ်တန့်ဆုံးရှုံးမှုများနှင့် Backup ကို system ကိုယူပါအလိုအလျှောက်ကုန်သည် setting ကိုအရသိရသည် EA ၏သတ်မှတ်လိမ့်မည်။
Trading Manager Pro EA - သင်အောင်မြင်ရန်တစ်ခုတည်းသော Forex Trading Tool တစ်ခု
ကြိမ်မြောက်နှင့်အတူပျက်ကွက် EA ၏ဖြစ်ပါသည်အလွန်ဖှယျအခွင့်အလမ်းတွေကိုရှိပါတယ်။ ဒီ software ကိုအာမခံမယ့်များ၏ဖန်တီးရှင် 80% အောင်မြင်မှုနှုန်းထက်ကိုပိုပြီး နှင့်လည်းအတည်ပြုထားသောရလာဒ်များပေးလိမ့်မည်။
ထရေးဒင်း Manager ကို Pro ကို EA ၏ မယုံနိုင်စရာစျေးနှုန်း, ဆိုလိုသည်မှာသာ $ 599 (starter ဗားရှင်း / 1 တိုက်ရိုက် & 1 Demo အကောင့်အခမဲ့အပ်ဒိတ်များ & ပံ့ပိုးမှုသည်စျေးလျှော့စျေး) မှာချက်ချင်းမရရှိနိုင်ပါသည်။ ဒါကြောင့်သင့်ရဲ့မိတ္တူဖမ်းပြီးမှမစောင့်ကြဘူး!
အဆိုပါတရားဝင်ထရေးဒင်း Manager ကိုသွားရောက်ကြည့်ရှု Pro ကို EA ၏က်ဘ်ဆိုက်
ထရေးဒင်း Manager ကို
ထရေးဒင်း Manager ကို EA ၏
ထရေးဒင်း Manager ကို EA ၏ပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း
ထရေးဒင်း Manager ကို Pro ကို
ထရေးဒင်း Manager ကို Pro ကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း
TRADING Manager Pro ကို EA - အားလုံး ONE Forex ကျွမ်းကျင်သူအကြံပေးဖျော်ဖြေမည် UPDATE + 153.7% MONTHLY Return / DD <10% တစ်ခုတည်းသောချစ်ခင်ရပါသောသူချင်း Forex ကုန်သည်, သတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့သော! ထရေးဒင်း Manager ကို Pro ကို EA ၏ပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း - အခမဲ့အပိုဆုအတူ MT4 သည်တစ်ခုမှာ Forex ကျွမ်းကျင်သူအကြံပေးခုနှစ်တွင်အားလုံးနဲ့အကျိုးအမြတ် FX စက်ရုပ် DeltonPro, Alden Matteo အားဖြင့် Created Sniper Suite, Spartan Bolt ကဖြန့်ချိခဲ့ပြီးသတ်မှတ်ရန်! ဒီနေရာမှာနောက်ထပ်သတင်းအချက်အလက်များနှင့် (DeltonPRO, Sniper Suite သို့မဟုတ် Spartan Bolt က EA ၏အစုံလိုမျိုး) အခမဲ့ဆုကြေးငွေရယူပါ: https://www.bestforexeas.com/trading-manager-pro-ea-review/ ထရေးဒင်း Manager ကို Pro ကို EA ၏တစ်ဦးအလွန်အမြတ်အစွန်း Forex ကျွမ်းကျင်သူဖြစ်ပါသည် အကြံပေးပုဂ္ဂိုလ်များနှင့် Alden Matteo နှင့်သူ၏အသုံးပြုနေသူများကဖန်တီးယုံကြည်စိတ်ချရသော FX ထရေးဒင်းစက်ရုပ်... ဆက္ဖတ္ရန္
ဗားရှင်းသစ် - TRADING Manager Pro ကို EA - အားလုံး ONE Forex ကျွမ်းကျင်သူအကြံပေး performance UPDATE + 908.7 %% MONTHLY Return / DD <10% တစ်ခုတည်းသောချစ်ခင်ရပါသောသူချင်း Forex ကုန်သည် IN, UPDATE! ထရေးဒင်း Manager ကို Pro ကို EA ၏အနက်နယူးဗားရှင်း - MT4 သည်တစ်ခုမှာ Forex ကျွမ်းကျင်သူအကြံပေးခုနှစ်တွင်အားလုံးပြီးတော့အခမဲ့အပိုဆုအတူအမြတ် FX စက်ရုပ် DeltonPro, Sniper Suite, Spartan Bolt ကဖမ်းဆီးခံခဲ့ရသူ Alden Matteo အားဖြင့် Created သတ်မှတ်ရန်! ဒီနေရာမှာနောက်ထပ်သတင်းအချက်အလက်များနှင့် (DeltonPRO, Sniper Suite သို့မဟုတ် Spartan Bolt က EA ၏အစုံလိုမျိုး) အခမဲ့ဆုကြေးငွေရယူပါ: https://www.bestforexeas.com/trading-manager-pro-ea-review/ ထရေးဒင်း Manager ကို Pro ကို EA ၏တစ်ဦးအလွန်အမြတ်အစွန်း Forex ကျွမ်းကျင်သူဖြစ်ပါသည် အကြံပေးပုဂ္ဂိုလ်များနှင့် Alden Matteo အသုံးပြုနေသူများကဖန်တီးယုံကြည်စိတ်ချရသော FX ထရေးဒင်းစက်ရုပ်... ဆက္ဖတ္ရန္